Samsung Galaxy S7, fahatsapana voalohany | Androidsis
Samsung Galaxy S7, fahatsapana voalohany
Andro farany ho an'ny Samsung ny omaly alina. Ilay mpanamboatra Koreana nanolotra ny terminal vaovao an'ny Galaxy S tamin'ny hetsika iray izay niavakaany tamin'ny sisa noho ny fizotrany tsotra tsy misy dikany. Fotoana fohy taorian'ny nahitanay nanandrana ny roa Samsung Galaxy S7 toa ny Samsung Galaxy S7 Edge, fantsona roa mitazona endrika mitovy amin'ny an'ny teo alohany, na dia misy aza ny fanatsarana sasany.
Mba tsy halahelo anao amin'ny antsipirihany rehetra, mitondra anao izahay anio fahatsapana voalohany taorian'ny nanandramany ny Samsung Galaxy S7 tao amin'ny Mobile World Congress 2016. Fantsona iray izay namela tsiro be teo am-bavantsika noho ny faran'ny kalitaony, fakan-tsary matanjaka ary indrindra indrindra, tamin'ny nanamarihan'ny mpanamboatra Koreana ireo olana izay nanakiana ny Samsung Galaxy S6 sy Samsung. Galaxy S6 Edge.
Samsung Galaxy S7 mitazona ny famolavolana ny maodely teo aloha
Ny zavatra voalohany miavaka rehefa maka ny Samsung Galaxy S7 dia azy fitoviana lehibe amin'ilay maodely teo aloha. Amin'ity tranga ity dia nanapa-kevitra ny Samsung fa tsy hanavao mihitsy, manolotra telefaona izay tena mitovy amin'ny Galaxy S6. Mety ho tianao bebe kokoa na latsak'ity ity, saingy tsy misy olona handà fa tsara tarehy ny endriny. Ary raha manampy famaranana kalitao amin'izany isika dia manana terminal miaraka amin'ny fisehoana eo amin'ny haavon'ny elanelana izay kasainy hovitaina.
Raha lazaiko aminao fa ny Samsung Galaxy S7 dia manana fitaovana tsara indrindra eny an-tsena dia tsy ho gaga ianao. Toy ny mahazatra, ny sainam-pirenen'ny mpamokatra indray dia manana fitaovana tsara indrindra, ary koa mampiditra tsy ampoizina tena mahaliana. Ary ny hanombohana ny Samsung Galaxy S7 dia mahatohitra vovoka sy rano noho izany Fanamarinana IP68 izay mamela ny fitaovana alentika ao anaty rano mandritra ny 30 minitra. Ankoatr'izay, Samsung dia nahavita nanokana ny port micro USB, noho izany dia tsy mila plug-n'izy ireo hiarovana ny terminal.
Ny zava-baovao lehibe hafa dia miaraka amin'ny slot micro SD card. Eny, Samsung dia nianatra ny lesona nianarany tamin'ny taona lasa ary miverina mampiditra a slot micro SD card amin'ny Samsung Galaxy S7 anao. Fiovana roa mety hahatonga ny mpanjifa ho diso fanantenana amin'ilay maodely teo aloha dia matoky ny mpanamboatra Koreana indray. Ary ianao, ahoana ny hevitrao? Heverinao ve fa hanjaka amin'ny tsenan'ny telefaona i Samsung, sa efa tara loatra ny fandinihana ny fandrosoan'ny mpamokatra toa an'i Huawei?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S7, fahatsapana voalohany